MPANAKANTO ANY IVELANY :: Novidian’ny Karàna mpanefoefo iray amina miliara i Beyonce • AoRaha
MPANAKANTO ANY IVELANY Novidian’ny Karàna mpanefoefo iray amina miliara i Beyonce
Vola be mirarakompana. Nantsoina fianakaviana manan-karena iray avy any Udaipur tanàn-dehibe iray any Inde, tamin’ny herinandro lasa teo;, i Beyoncé. Hanafana lanonam-panambadian’i Isha Ambani sy Anand Piramal zanaka mpanefoefo no anton’izany fanasana izany.
Mahagaga sy nahavariana ny mpanara-baovao maneran-tany ny sandan’izao fanasana natao taminy izao satria nitentina 4 tapitrisa dôlara (13 miliara ariary) ny vola naloan’ireto fianakaviana avy any Inde ireto taminy.
Nambaran’ny gazety iray avy any Etazonia fa nanokanana sehatra manokana sy efitrano nahafahana misolo fitafiana mihitsy ity mpanakanto kalaza ity nandritra ny lanonana. Ankoatra an’i Beyoncé dia fantatra ihany koa fa tonga nanatrika io lanonam-panambadiana io ny mpanakanto Priyanka Chopra sy Nick Jonas ary ny vadin’ny Filoham-pirenena amerikanina teo aloha Hillary Clinton. Araka ny fantatra dia tsy mitsaha-miakatra ny lelavola raisin’i Beyonce amin’ny fanafanana lanonam-pianakaviana nanomboka tamin’ny taona 2005.
LALAM-BAOVAO ARA-JAVAKANTO :: Namaky lay ny “E-Show” i Tsanta Randriamihajasoa
TOETR’ANDRO :: Hivadika rivo-doza ilay andro ratsy ao amin’ny ranomasimbe Indianina